Maalintii Lixaad oo uu galay dagaallka ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maalintii Lixaad oo uu galay dagaallka ka socda gobolka Tigray ee dalka...
Maalintii Lixaad oo uu galay dagaallka ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia
Maalintii Lixaad ayaa dagaallo ay ka socdaan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Dagaalkan ayaan ilaa iyo hada la ogeyn qasaaraha dhabta ah ee uu geystey, inkastoo la sheegey in ku dhawaad 100 askari dhaawacyo looga daweynayo gobolka Amxaarada.
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sii riixaya olole militari oo uu ku dhawaaqay Arbacadii, in kasta oo caalamku ku baaqay in wadahadal lala yeesho Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray (TPLF) si looga fogaado dagaal sokeeye.
Hadaba dagaalkani saameyn intee la eg ayuu ku raabi karaa Ethiopia iyo guud ahaan Geeska Africa, mase jirtaa wadiiqo kale oo lagu xalin karo ismaandhaafka gacan ka hadalkan keeney ee u dhexeeya maamulka Tigray iyo Dowlada Dhexe?
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Xoogaga wadaniyiinta gudaha iyo Dabada ku Noolaa oo Xarunta Madaxtooyada kula kulmay
Next articleXisbigii Hanti wadaaga Soomaaliyeed iyo Xoogaga Wadaniyiinta Soomaliyeed Maxay ku kala duwan yihiin
Tiro Madaafiic hoobiyeyaal ah ayaa xalay saqdii dhexe lagu garaacay qeybo ka mid ah magaalada Baydhabo oo hadda xarun u ah Maamulka Koonfur galbeed...
Abiy Axmed oo sheegay in uu diyaar u yahay in uu...